Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FCMB si Nigeria & ụwa | TAA
Enweghị ohere maka ndị omempụ na Kwara - CP
Ndị agha Nigeria guzobere ebe mgbasa ozi maka "Ọrụ Njedebe Ikpeazụ"
Senate kwadoro Mike Pompeo dịka odeakwụkwọ nke United States
Ndị oru nta akụkọ Bauchi kwadoro nleghara anya n'oge nleta nke Buzi Buhari
NSE na-apụta ụlọ maka 2018 ASEA ogbako
Naira na-enwe ekele maka ọnụ ahịa megide dollar na windo ndị nwere ego
Ndị ọrụ ugbo osikapa Ekiti nwetara N80 nde ugbo ntinye
Ahịa 378.19 nde ego na-azụ ahịa na-akwụ ụgwọ N6.26 ijeri Naijiria ...
#BBNaija: Cee-C na-achọ nhazi iwe iwe
Kanye West na-egbuke egbuke Twitter ka o kwupụtara nkwado maka President ...
Korede Bello: Eji m ọrụ siri ike na-akwụ ụgwọ m
#BBNaija: Aga m aga maka ikpo iwe iwe - Cee-C
Roy Hodgson: Wilfried Zaha adịghị adaba
Akụkọ Liverpool bụ Steven Gerrard na-agba ọsọ maka ọrụ Rangers
Caster Semenya na-elekwasị anya site na egwuregwu ọhụrụ testosterone
England na-akwadebe iji ree egwuregwu Stadium Wembley na otu onye na-akpata ego
Ndị ọkà mmụta sayensị na-emepụta ọgwụ ọjọọ niile maka nje HIV
Iran weputara ngwa ngwa Soroush iji dochie Telegram
GTBank na-akwado ndị na-emepụta ihe na Naijiria maka ịma aka zuru ụwa ọnụ
Nintendo kwa afọ uru soar 36 percent ka $ 1.27bn na Gbanwee ahịa
Ụdị ihere nke ọzọ
Di elu nke onye ntorobịa Nigeria
2019: Ndi isi ochichi nke Naijiria
President Buhari: M kpebisiri ike iweghachite ego a na - eburu ihe '
Video: Toke Makinwa na-ekpughe afọ isii na ọgụ na fibroid
Rom na-akatọ 'omume mkparị' na Liverpool
Egwuregwu na-akpata: EFCC na-emechi ikpe megide ụgbọ elu nke ikuku ụgbọ elu lara ezumike nká
EFCC, n'April 17, kpuchitere ikpe ya megide ụkọ ụgbọ elu nke ụgbọ elu, Tony Omenyi, bụ onye na-ekpe ikpe maka ebubo na ọ na-agbagha N136 nde pụtara maka ịzụta ogwe aka site n'aka ndị agha.
Gọvanọ El-Rufai na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-emepụta ego
Gọvanọ nke Kaduna State, Mallam Nasir El-Rufai, akpọwo ndị nwere ike ịchụ ego iji chọpụta ohere ndị a na-enweghị ohere na ụlọ ọrụ agro-allied.
Ọnwụ ikpe Ex-Gọvanọ: Abia na-agbakọ ego na-agba ọsọ
Otu onye na-akwụ ụgwọ na Abia Government House, Akpan Udoh, onye a na-eme atụmatụ iji gbaa akaebe n'ihu ikpe nke onye isi Abia Gọvanọ, Orji Uzor Kalu, dị ugbu a na-agba ọsọ, ọkàiwu ahụ gwara Ụlọikpe Ukwu Federal na Lagos na Monday.
Ụlọ nke ụlọnga iji nyochaa ntụgharị N2bn, $ 3.8m si ire nke PHCN
Ụlọ ndị nnochite anya kpebisiri ike nyochaa ngbanarị N2 na nde $ 3.8 maka ihe nrite nke ire ere nke Power Holding Company nke Nigeria (PHCN).
Nwunye PHCN: Ntugharị iji nyochaa ọnwụ nke efu nke N2bn, $ 3.8m ọdịmma
Ụlọ ndị na-anọchite anya ya ga-enyocha nyocha nke ebubo nke ijeri dollar abụọ na dollar 3.8 site na nkwụnye ego nke enweghị ụgwọ maka ọdịmma nke ire ere nke ụlọ ọrụ PHCN.
Court adjourns Uzor Kalu ama ọkọdọhọ N3.2bn wayo ikpe
Ụlọikpe Kasị Elu Federal, Lagos, akwadola ikpe ikpe ruo mgbe March 6 nọ na N3.2bn na-akwụ ụgwọ maka ndị omekome nke Abia State, Orji Uzor Kalu, site n'aka Òtù Na-ahụ Maka Mmebi Iwu na Ego.
Ụlọikpe na-ekwupụta ihe ngosi na ebubo na N3.2bn na-agba akwụkwọ nke ex-Gọvanọ Orji Kalu
Onyeikpe Mohammed Idris nke Ụlọikpe Kasị Elu Federal na Lagos kwetara na ọ bụ akwụkwọ abụọ e nyere megide gọvanọ gọvanọ nke Abia State, Orji Uzor Kalu site na Commission Economic Crime (Financial Equity Commission) (EFCC).
Ndị uweojii na-ejide ụgbọala na-apụ apụ na Lagos
Ndị uweojii ejidewo ndị òtù òtù ndị ohi si Benin Republic, bụ ndị kwuru na ha nwere ike ịchọta ụgbọala ndị dị na Lagos ma na-ere ha n'aka onye na-ere ụgbọ ala na mba ha.
Gọvanọ Ambode ụda N30,000 kwa ọnwa chọrọ maka 1,000 Ready.Set.Work interns
Lagos State Gọvanọ Akinwunmi Ambode kwadoro ugwo nke N30,000 dị ka ihe gbasara ọnwa chọrọ ka ndị Ready.Set.Work (RSW) interns bụ ndị etinyeworo ya na òtù dị iche iche maka ọnwa isii na-akwụ ụgwọ.
Economist na-ebuli mkpuchi maka iwepụ ihe ịma aka ego
Onye isi ego, Maazi Opeyemi Agbaje, ekwuola na ihe ọ kọwara dị ka ihe ịma aka ego na-emefu ego, na-ekwu na profaịlụ nke ugbu a nke mba ahụ, karịsịa nke ndị mba ọzọ, na-eche na nsogbu akụ na ụba na-akpata ego.
Ụlọikpe kwadoro onye ọchịagha Gọvanọ Uzor Kalu, ndị ọzọ kwuru na ọ bụ N3.2 ijeri ikpe ikpe na February 19
Onyeikpe Mohammed Idris nke Ụlọikpe Kasị Elu Federal na Lagos kwadoro February 19 iji nụ ọzọ na ikpe nke onye bụbu Gọvanọ nke Abia State Dokita Orji Uzor Kalu, na ndị ọzọ na-ekwu banyere ịgha ụgha nke N3.2.
EFCC na-akwado mmadụ abụọ FCMB maka aghụghọ
Mgbe Ebenezer na Walter kwadoro ọnụ na ọnụ ọgụgụ atọ na-agbaso atụmatụ izu ohi na izu ohi, Ebenezer amaburu ọnụ na ụgwọ ise nke inweta ego na-ezighị ezi. Ha rịọrọ ka ha ghara ikpebi ebubo ha niile megide ha.
Ngwongwo ahia nke Naijiria abiara uru inweta ya, kwado ala site na 0.33 percent
Ihe ndị dị na Ndekọ Ntugharị Na-ahụ Maka Ntaneti Naijiria na Friday dara ụda maka uru na-eme ka ọnụ ahịa ego ụbọchị isii gafere na Ntọala All-Share na 0.33 pasent.
Anọ a na-ekwu maka ebubo na-emegbu ndị ọzọ-Rep Eseme Nkeboh nke $ 1.362m, N46.5m
Mmadụ anọ, bụ ndị kwuru na ha nwetara $ 1.362 nde na N46. Nde nde 533 n'okpuru okwu ugha, site na onye otu n'ulo nke ndi otu nochite anya, Hon. Eseme Nkeboh, na Monday, weputara ya n'ihu Ụlọikpe Ukwu Federal, Lagos.
Ịzụ ahịa na Naijiria Exchange Exchange na-ekwusi elu elu
Ihe ndị dị na ahịa ahịa nke Naijiria nọgidere na-enwe nchebe n'ehihie na ụda mgbagwoju anya nke na-acha anụnụ anụnụ na-arịwanye elu nke ọnụ ọgụgụ 0.45 na-ebuli elu ala.
Ndị ahịa na-eme mkpesa maka ụkọ ego na ATM
Ndị bi na Kansụl Council n'ógbè FCT, na Fraịdee kụrụ ọnụ ego ego na Machine Macheller (ATMs) na mpaghara ahụ.
Chams na-agba afọ 32 na-akwado ihe ngwọta ọhụrụ maka ndị ọha na eze na ndị ọrụ onwe ha
Òtù ahụ na-agafe na Identity Management, Biometric Solution Platforms; Ọrụ Outsourcing Services Business; Usoro Ịkwụ Ụgwọ Kọmputa na Kaadị; Ego nkwụ ụgwọ; Ahịa ATM, nkenye na nkwado; POS ndenye na nkwado.
NSE All-Share Index na-ada site 0.24 percent
Ihe ndị dị na Nzụkọahịa Na-ahụ Maka Ntaneti (NSE) dị na Tọzdee na Index nke Nile-Share na 0.24 pasent dịka nrite.
12Page 1 nke 2
Onu ahia nke Naijiria (NSE) n'onwa onwa Ogugu weghaara ikike ndi ozo maka 2018 African Securities Exchange Association (ASEA).
Nri onwa onwa onu ogugu onu ogugu na dollar nke di na windo ndi ozo.
Kọmitii nke ndị uweojii (CP), na Kwara, Aminu Saleh, ekwuola na enweghị ohere maka ndị omempụ na steeti.
Ndi agha Naijiria eguzobewo ulo oru mgbasa ozi nke oru "KWESI OZI" n'ihi imalite na North-East na May 1.
Onye isi obodo US choputara Thursday ka kwadoro onye isi ochichi CIA onye nduzi Mike Pompeo dika odeakwụkwọ nke onwa Thursday, mgbe ndi agha Democrats meriri agha megide ndi isi ochichi Donald Trump.
Nwanyị na-esi nri maka ịzụta ihe onye India na-arụrụ ọrụ $ 6, 000
Otu onye na-esi nri 40, Grace Uzo, bụ ụnyaahụ ka a kpọpụrụ ya n'ihu Ụlọikpe Magrisrate nke Lagos, na-ekwu na ya na-ezu ohi na 6,000 dollar nke India, 300 Euro.
Jerome Boateng nke Germany na "ịlụ ọgụ" iji dabaa maka iko ụwa
Ezigbo onye na-akwado Bayern Munich Jerome Boateng na-ekwu na ọ "ga-alụ" iji kwadoo World Cup mgbe a chụsịrị ya maka oge fọdụrụnụ na nhụjuanya ụkwụ ya.
Ndị na-eto eto bụ ego, ọ bụghị nsogbu - ozi UN
Onye odeakwụkwọ General Secretary General nke UN banyere Ntorobịa, bụ Jayathma Wickramanayake, kwuru na ndị na-eto eto bụ ihe onwunwe karịa ịbụ nsogbu.
NYSC na-agọnahụ akụkọ banyere Sharia na ogige ntụrụndụ FCT
Òtù Na-ahụ Maka Ndị Ntorobịa Na-ahụ Maka Ụmụaka, NYSC, ekwetaghị akụkọ mgbasa ozi na o webatara iwu Sharia na nchịkwa nke ogige ntụrụndụ FCT.
Ugbochi ndi agha nke agha na Yemen
Ulo elu nke ndi agha Saudi gbachiri "agha agha" nke ndi nnupu isi nke Yemeni kpochapuru na obodo Jizan nke dị na South Coast, ndi otu ndi agha na-eduga na Saudi.